हाइप्रोफाइल नेता तथा उम्मेदवारहरुले मतदान गरे
[2017-11-26 오후 6:01:00]
देशभरका ३२ जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन केही स्थानमा बाहेक अधिकांश स्थानमा जारी छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हाइप्रोफाइल नेता तथा उम्मेदवारहरुले पनि आ-आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका - १ को अन्नपूर्ण मावि खोप्लाङ केन्द्रमा मतदान गरेका छन्। उनले केहि समय लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले मतदान गरेका छन्। गोरखा सिरानचाक गाउँपालिका ८ जौबारस्थित परोपकार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट श्रेष्ठले मत दिएका हुन्। उनी गोरखा २ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती र रोल्पाका उम्मेदवार वर्षमान पुनले पनि सगै मतदान गरेका छन्। उनीहरु दुबैले माडीचौर मतदान केन्द्र रोल्पाबाट मतदात गरेका छन्।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट ताप्लेजुङमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराइले मतदान गरेका छन्। भट्टराइले बिहान करिव साढे सात बजे मतदान गरेका हुन्।
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाँउपालिका ३ स्थित नारायणी उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पुगेर भट्टराइले मतदान गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ओखलढुङ्गामा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका रामहरि खतिवडाले मतदान गरेका छन्। ओखलढुङ्गाका मानेभञ्ज्याङ ६ थाक्ले मतदान केन्द्र (ख) बाट उनले मतदान गरेका हुन्। ओखलढुङ्गामा दुई युवा उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चित छ। वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका यज्ञराज सुनुवार चुनावी मैदानमा छन्।
पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं वाम गठबन्धनका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका अग्निप्रसाद सापकोटाले मतदान गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी ४ स्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विदालय केन्द्रबाट सापकोटाले मतदान गरेका हुन्।
यस्तै कांग्रेस उम्मेदवार रामशरण महतले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका राष्ट्रिय मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं वाम गठबन्धनका तर्फबाट जाजरकोटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका शक्ति बस्नेतले मतदान गरेका छन्।
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले जाजरकोटको पिपेस्थित वागेश्वरी निमावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्।